Tatoazy vaovao an'i Lady Gaga: samoina ho fankalazana an'i Metallica | Ny fanaovana tatoazy
Ny tatoazy vaovao an'i Lady Gaga, ilazana ny fiarahany miasa miaraka amin'i Metallica
Antonio Fdez | | Tatoazy malaza
Nandritra ny gala Grammy Awards 2017 farany teo, ny fampisehoana nataon'i Lady Gaga niaraka tamin'i Metallica no iray amin'ireo "fampisehoana" be mpitia indrindra nataon'ny mpijery sy mpankafy ilay hetsika. Ary na dia tsy tokony ho vaovao aza ny fampisehoana mozika Ny fanaovana tatoazy, zava-dehibe ny mitadidy izany ao an-tsaina rehefa miresaka tatoazy lady gaga vaovao. Ilay "kintana Pop" dia naniry ny hanoratra ao amin'ny vatany ilay fampisehoana ho avy tsy ho ela.
Ora vitsy taorian'ny nisehoan'ny Grammy Awards, Lady Gaga Nampiakatra sary tao amin'ny kaontiny Instagram izy izay ahitanao ny tatoazy goavambe izay natao teo an-damosiny ho "fanomezam-boninahitra" ny tarika rock izay niarahany sehatra. Ataony mazava tsara amin'ny famaritana ny famoahana azy: "Ny samoina sy Metallica". Ary ny marina dia mahavariana ny tatoazy.
Na dia tsy niresaka tamin'ny antsipirihany momba ny mpanao tatoazy nanao an'io asa tsy nampoizina io aza izy, dia miharihary fa tena tsara ny vokany. Ny fanaovana tatoazy lehibe toy izany dia tena sarotra, ary vao mainka aza raha te hanambatra singa samihafa toy ny amin'ity tranga ity ianao. Manana samoina sy karan-doha lehibe isika. Ary inona no dikan'ny tatoazy vaovao an'i Lady Gaga? Tsy nilaza na inona na inona momba an'io ihany koa ny mpanakanto, ka mila mitady ny fampahalalana avy aminay izahay.
Raha mijery lahatsoratra navoakanay izahay Ny fanaovana tatoazy volana vitsivitsy lasa izay ary niresaka momba izany dikan'ny tatoazy samoina, hitantsika fa ireo bibikely voalaza ireo dia maneho ny fanahy sy fanahy. Ho an'ny kolontsaina Japoney dia misy ifandraisany tsy fananan-tsiny, fahasambarana ary fitiavana. Na izany aza, ny samoina dia manana ny lafiny maiziny sy maizina kokoa. Ho an'ny kolontsaina maro taloha, ny samoina dia maneho ny fanahin'ny mpamosavy. Inona no dikan'ny nomen'ny Lady Gaga ny tatoazy vaovao? Amin'izao fotoana izao dia mistery izany.
The Moth & Metallica 🦋 ——-> 🔥🖤 # ink #tattoo #MothIntoFlame #MetalliGa #metal #grammys @metallica
Saripika nalefan'i xoxo, Joanne (@ladygaga) Feb 12, 2017 ao amin'ny 2: 51pm PST
Loharano - Instagram
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Ny fanaovana tatoazy » tombokavatsa » Tatoazy malaza » Ny tatoazy vaovao an'i Lady Gaga, ilazana ny fiarahany miasa miaraka amin'i Metallica
Wolf midradradradra amin'ny volana, ny tandindony amin'ny kolontsaina rehetra